Din pa ne owuda (1-4)
Onyansafo animka (5-7)
Awiei ye sen mfiase (8-10)
Nyansa so mfaso (11, 12)
Nna pa ne nna bɔne (13-15)
Nyɛ biribiara ntra so (16-22)
Nea ɔsɛnkafo no hui (23-29)
7 Din pa* ye sen ngo pa,+ na owuda ye sen awoda. 2 Eye sɛ wobɛkɔ awerɛhow fi sen sɛ wobɛkɔ apontow fi,+ efisɛ ɛno ne onipa biara awiei, na ɛsɛ sɛ ateasefo de hyɛ wɔn komam. 3 Awerɛhow ye sen ɔserew,+ efisɛ sɛ onipa anim yɛ mmɔbɔmmɔbɔ a, ɛyɛ ne koma yiye.+ 4 Anyansafo koma wɔ awerɛhow fi, na nkwaseafo koma de, ɛwɔ anigye fi.+ 5 Eye sɛ wubetie onyansafo animka+ sen sɛ wubetie nkwaseafo dwom. 6 Sɛnea nsɔe a ɛredɛw wɔ kuku ase dede te no, saa ara na ɔkwasea serew te;+ eyi nso yɛ ahuhude. 7 Nhyɛso betumi ama onyansafo ayɛ n’ade sɛ ɔbɔdamfo, na adanmude* sɛe koma.+ 8 Asɛm awiei ye sen ne mfiase. Eye sɛ wobɛtɔ wo bo ase sen sɛ wobɛma wo ho so.*+ 9 Nyɛ ntɛm mfa abufuw,*+ efisɛ nkwaseafo kokom na abufuw te.*+ 10 Nka sɛ, “Adɛn nti na kan nna no ye sen nnɛ?” na nyansa nnim sɛ wubebisa saa.+ 11 Nyansa a agyapade ka ho yɛ adepa, na mfaso wɔ so ma wɔn a wohu adekyee hann.* 12 Nyansa bɔ onipa ho ban+ sɛnea sika nso bɔ onipa ho ban no.+ Nanso nimdeɛ so mfaso ni: Nyansa kora ne wura nkwa so.+ 13 Susuw nokware Nyankopɔn no adwuma ho hwɛ. Sɛ ɔkyea biribi a, hena na obetumi ateɛ no?+ 14 Ɛda pa ba a, gye w’ani,+ na amanehunu da* ba a, hu sɛ Onyankopɔn na ayɛ eyi nso aka ho,+ sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa rentumi nhu biribiara a ɛbɛto wɔn daakye.+ 15 Me nkwa nna a mfaso biara nni so mu no,+ mahu ade nyinaa. Ebi ne sɛ, ɔtreneeni bi wɔ hɔ a, owu wɔ ne trenee mu,+ na ɔbɔnefo bi wɔ hɔ a, ne bɔne nyinaa akyi no, ɔtena ase kyɛ.+ 16 Nyɛ wo ho ɔtreneeni dodo,+ na nyɛ wo ho onyansafo nso ntra so.+ Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wosɛe wo ho?+ 17 Nyɛ bɔne mmoro so, na nyɛ ɔkwasea nso.+ Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wuwu ansa na wo bere aso?+ 18 Eye paa sɛ wubeso kɔkɔbɔ a edi kan no mu, na worennyae nea edi akyiri no nso mu;+ efisɛ nea osuro Onyankopɔn no, obetie abien no nyinaa. 19 Nyansa ma onyansafo yɛ den sen kurow mu mmarima ahoɔdenfo du.+ 20 Na ɔtreneeni biara nni asaase so a adepa nko ara na ɔyɛ a ɔnyɛ bɔne da.+ 21 Afei nso, mfa wo koma nni nsɛm a nnipa ka nyinaa akyi;+ anyɛ saa a, wobɛte sɛ w’akoa redome wo. 22 Efisɛ wunim wɔ wo komam paa sɛ, wo nso, woadome nkurɔfo mpɛn pii.+ 23 Eyinom nyinaa mede nyansa sɔ hwɛe, na mekae sɛ: “Mɛyɛ onyansafo.” Nanso mantumi. 24 Nea aba nyinaa, yɛrentumi nhu mu; emu dɔ yiye. Hena na obetumi ate ase?+ 25 Mede sii m’ani so sɛ mehu na mapɛɛpɛɛ mu, na mahwehwɛ nyansa ne nea enti a nneɛma bi sisi, na mahu sɛnea nkwaseasɛm yɛ bɔne na adammɔ nso yɛ agyimisɛm.+ 26 Nea mihui ni: Ade a ɛyɛ nwene sen owu ne ɔbea a ɔte sɛ ofirisumfo atena, a ne koma te sɛ asau, na ne nsa te sɛ afiase nkɔnsɔnkɔnsɔn. Nea osuro nokware Nyankopɔn no, ɔbea no rentumi nkyere no.+ Ɔbɔnefo mmom na ɔbea no betumi akyere no.+ 27 Ɔsɛnkafo no+ kae sɛ: “Hwɛ, nea mahu ni. Mehwehwɛɛ nneɛma no mu mmaako mmaako sɛnea ɛbɛyɛ a mehu nea ɛwom. 28 Nanso nea mekɔɔ so hwehwɛe no,* manhu. Nea mihui ne sɛ, wofa nnipa apem a, wubenya ɔbarima * baako wom, nanso worennya ɔbea baako mpo wom. 29 Nea mahu ara ne sɛ: Nokware Nyankopɔn no bɔɔ nnipa yiye,+ nanso wɔn ara na wɔafa akwan foforo bebree so.”+
^ Nt., “Edin.”
^ Nt., “ahomaso honhom.”
^ Nt., “Mma wo honhom mmpere.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nkwaseafo na wɔpere wɔn ho fa abufuw.”
^ Kyerɛ sɛ, wɔn a wɔte ase.
^ Anaa “ɛda bɔne.”
^ Anaa “nea me kra kɔɔ so hwehwɛe no.”
^ Anaa “ɔbarima a ɔteɛ.”